Paediatric counselling related to HIV/AIDS training June 2018 – AHRN-Myanmar
Paediatric counselling related to HIV/AIDS training June 2018
By AHRN IT — In Activities	— 25/07/2018
Paediatric counselling, related to HIV/AIDS training, was successfully conducted in Best Western Green Hill Hotel on7& 8 June, 2018.
The lively and energetic training included topics such as: basic principles in child counselling and counselling practice for 3-6 years old, 6-11 years old and 11-18 years old. Basic communication skills and disclosure to HIV infected child were presented and discussed as well with counsellors from Kachin state, Shan state and Sagaing region 24 counsellors and counselling officers from 13 different projects and Health Director Dr Aung Yu Naing actively participated in the training. External trainer from Marble Psychological Services – Drs. Sjoukje W. Zijlstra / Clinical (Child) Psychologist provided2days training. Translation was done by Program Coordinator (Counselling) Thazin Than Naing.
�Paediatric counselling related to HIV/AIDS သင်တန်း ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပ (ဇွန် ၂၀၁၈)
�Paediatric counselling related to HIV/AIDS သင်တန်းကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ Best Western Green Hill Hotel တွင် ဇွန်လ ၇ နှင့် ၈ ရက်တွင် အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါသည်။�.�သင်တန်းတွင် ကလေးတွေကို Counselling လုပ်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် အခြေခံစည်းမျဉ်းများ၊ ကလေး၏ အသက်အပိုင်းအခြား ၃ နှစ် မှ ၆ နှစ် ၊ ၆ နှစ် မှ ၁၁ နှစ် ၊ ၁၁ နှစ် မှ ၁၈ နှစ် ပေါ်မူတည်၍ Counselling မည်သို.လုပ်ဆောင်မည်နည်း, Basic Communication Skills and HIV ကူးစက်ခံရသော ကလေးငယ်များအား ၎င်းတို့၏ ရောဂါအခြေအနေကို မည်ကဲ့သို. အသိပေး ဖွင့်ဟပြောဆိုမည်နည်း စသော အကြောင်းအရာများ ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တို့မှ သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆွေးနွေး သင်ယူခဲ့ကြပါသည်။�.�(၂) ရက်တာ သင်တန်းတွင် AHRN စီမံချက် ၁၃ ခု မှ Counselor နှင့် counselling officer (၂၄) ဦး နှင့် AHRN ၏ Health Director ဒေါက်တာအောင်ယုနိုင်တို. တက်ရောက်ခဲ့ပြီး AHRN ရန်ကုန်ရုံးချုပ်မှ မသဇင်သန်းနိုင် (Program Coordinator (Counselling) က သင်တန်းတွင် မြန်မာဘာသာသို. ပြန်ပေးပြီး Marble Psychological Services – Drs. Sjoukje W. Zijlstra / Clinical (Child) Psychologist သင်ကြား ပို့ချခဲ့ပါသည်။�